2018 BASELWORLD - Na - aga njem na -
Kwa afọ na oge opupu ihe ubi, Basel bụ ebe obibi otu izu maka ndị 1,800 ụlọ ọrụ ndị na-eche nche na ọla na Baselword. Ndị na-ahazi ahia ahia a dị oke mkpa adịghị eme mkpesa banyere mkpa ndị ọbịa. A na-atụ anya karịa ahịa 100,000 na ndị nnọchiteanya nke ndị wholesalers ịga World Fair maka Watches na Jewelery. Na March 22, 2018 ọnụ ụzọ ámá nke ngosi ga-emeghe maka ndị ọbịa.
Na onye na-akwọ ụgbọala gị na BASELWORD - Nyefee Basel Service
Anyị EuroAirport Basel bụ nanị minit ole na ole site na ihe ngosi ahụ. Mana n'ezie - dị ka ọtụtụ ndị njem azụmahịa - ị ga - achọ ịga leta ndị na - emepụta ihe maka ọtụtụ ụbọchị. Ugboro ugboro, ndị njem anyị na-eme ọtụtụ oge kachasị sie ike n'oge azụmahịa nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụ ya mere anyị ji enye ndị ọrụ ụgbọelu na-anaghị ahụ maka oge Baselworld.
EuroAirport gaa nhọpụta gị. Njem na-eme nke ọma na a klas mbụ nke limousine nke German ma echegbula onwe gi banyere uzo okporo uzo ma obu ebe ndi ozo n'ile ihe ngosi. Na mgbakwunye na oge na ọhụụ nke ndị njem anyị, anyị na-ewu ewu n'etiti ndị ọchụnta ego, n'ihi na anyị na-aṅa ntị na ezi uche zuru oke mgbe anyị na-akwọ ụgbọala.
Nyefee ọrụ Basel mfe online
Anyị maara - oge bụ ego. Ọ bụ ya mere anyị ji guzobe ntinye akwụkwọ n'ịntanetị ngwaọrụ gị. Naanị otu awa na-ebute oge, anyị dị njikere maka gị dịka onye ukwu na onye na-anya ụgbọala n'ihu ụlọ nkwari akụ gị ma ọ bụ na ọdụ ụgbọ elu na nbata na mpaghara ịpụ.
Ndị otu nke ọrụ ntanet Basel na-achọ ka ị nọrọ na Baselworld ma bụrụ ezigbo azụmahịa
Edere na: Ụgbọ okporo ígwè Basel Baselworld Ọrụ mbufe
taxi.flughafen March 16, 2017 November 18, 2017 Uncategorized Enweghị ihe ọ bụla
← 2018 BASELWORLD - Na-agafe na njem na Basel
Obodo na-eme njem ma na-elegharị anya na Passel Service →